Farmaajo oo soo saaray amar madaxweyne oo uu uga horyimid tallaabooyin uu qaaday Rooble - Caasimada Online
Home Warar Farmaajo oo soo saaray amar madaxweyne oo uu uga horyimid tallaabooyin uu...
Farmaajo oo soo saaray amar madaxweyne oo uu uga horyimid tallaabooyin uu qaaday Rooble
Muqdisho (Caasimada Online)- Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa soo saaray qoraal uu ku jebinayo go’aano horay uga soo baxay xafiiska Ra’iisul Wasaare Rooble.
Sidoo kale qoraalka Farmaajo ayaa u muuqda mid jawaab u ah tallaabadii uu galabta qaaday guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe oo taliyayaasha ciidamada amray inay hadda kadib isaga ka amar qaataan.
Farmaajo ayaa qoraalkiisa ku xusay laba Agaasime wasaaradeed oo dhawaan xilalka laga qaaday, kuwaas oo xil ka qaadistooda uu waxaba kama jiraan kasoo qaaday.
Hoos ka akhriso qoraalkaan ka soo baxay xafiiska Farmaajo
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hortagaya ku takri-falka awoodda dowladnimada, musuqmaasuqa maamul iyo xadgudubka ka dhanka ah shaqaalaha qaranka;
Madaxweynaha oo tixraacaya Xeerarka jiheynayey maamul wanaagga iyo ilaalinta danta guud ee uu soo saaray 18-kii Janaayo, 2018 iyo 7dii Ogoosto 2021;
Madaxweynaha Jamhuuriyadda oo ka duulaya cabashooyinka iyo khilaafaadka ka taagan isku dayada in isbeddel maamul iyo shaqaale lagu sameeyo qaar ka mid ah Hay’adaha dowladda, iyada oo la ogsoon yahay xaaladda doorasho ee uu dalku ku jiro;
Waxa uu soo saaray Xeerkan;
1. Waxaa Xeer Madaxweyne lagu joojiyey dhammaan go’aammada ku saabsan isbeddelada maamul iyo shaqaale ee Hay’adaha Dowladda, inta lagu guda jiro dhammeystirka doorashooyinka.
2. Madaxweynuhu waxa uu baabi’iyey dhammaan wixii magacaabis iyo go’aan maamul ah oo taabanaya wax ka beddelka Hay’adaha gudaha ee dowladda iyo shaqaalaha Rayidka ah, laga soo bilaabo maalintii la dhaariyey Xildhibaannada Baarlamaanka ee 14-ka Abriil 2022.
3. Xeerkan Madaxweyne wuxuu baabi’inayaa isbeddelada maamul ee lagu sameeyay Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Ku-simaha Maareeyaha Guud ee Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka iyo Hay’adda Tayo Dhawrka Qaranka.
4. Madaxweynuhu wuxuu mar kale farayaa dhammaan hay’adaha Dowladda inay ka fogaadaan xilligan xaasaasiga ah in xilalka iyo hantida dadweynaha looga faa’iideysto dano gaar ah iyo si aan u adeegayn danta guud ee dalka, qof walbana lagula xisaabtamayo ku takrifalka hantida iyo awoodda qaran.
5. Madaxweynuhu wuxuu adkaynayaa in hay’adaha dowladda ay ka fogaadaan tallaabo kasta oo dhaawici karta sumacadda dowladda iyo hay’adaheeda.